University of Medicine, Magway
Orthopaedic and Traumatology
I am very pleased to welcome you to the University of
Medicine, Magway. Over eighteen years have passed from
the establishment of this University in 2001.
The University of Medicine Magway is recognized
by the government of the country for award of the
medical degree that allows the practice of medicine
in our country by graduate of the university.
To be internationally recognized University which provides standard medical education and produces
competent medical doctors.
1. to acquire the fundamental knowledge, skills and attitude to become competence medical doctor.
2. to provideaconducive learning environment and effective teaching learning stategies.
3. to promote opportunities for innovation and research culture
4. to provide good leadership and management
5. to inspire lifelong learning attitude
Core Value of UMMG
ဆေးတက္ကသိုလ်၊ မကွေး၏ (၁) နှစ်တာ အတွင်း ဆောင်ရွက်ခဲ့မှုများ
(၅-၂-၂၀၁၉ မှ ၈-၂-၂၀၂၀)
Welcome to University of Medicine, Magway
To produce basic medical doctors who have good medical knowledge in accordance with good medical skills in both clinical and community setting
Click here to acccess our Learning Management System.
Click here to access our E-Library system.
UMMG Web Mail
Click on the Access your University email account.
Click here to see the our training Hospital.
M.B.,B.S, M.Med.Sc(Pathology), Ph.D (Pathology), Dip.Med.Ed
I am very pleased to welcome you to the University of Medicine, Magway. Over eighteen years have passed from the establishment of this University in 2001. The founding father of the University was Professor Than Myint presided as the first Rector. With the tireless energy and enthusiasm combined with his vision Prof. Htay Hla, the sixth Rector had led so many to design the wonderful buildings and campus. It is great honor for me to be the Rector of this University at this moment because I know we have some of the very best clinicians and teaching staff in Myanmar today for our students to deliver high class education in Medicine with particular regard to their application in health care.
Official Web Site Today
The latest news from University of Medicine, Magway
28 Jan 2021 University
ဆေးတက္ကသိုလ်၊ မကွေး ပထမအကြိမ် Covid-19 ကာကွယ်ဆေး ထိုးနှံခြင်း (၂၇.၁.၂၀၂၁)
22 Dec 2020 Mathematics
ဆေးတက္ကသိုလ်၊ မကွေး ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းနှင့် အကြီးစားပြုပြင်မွမ်းမံခြင်းလုပ်ငန်းများ၏ တင်ဒါဖွင့်ဖောက် စီစစ်ရွေးချယ်သည့် အခမ်းအနားကျင်းပပြုလုပ်ခြင်း
02 Dec 2020 University
အလုပ်သင်ဆရာဝန်များလူထုဆေးပညာသင်တန်း ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနား ကျင်းပပြုလုပ်ခြင်း (1.12.2020)
19 Nov 2020 University
အလုပ်သင်ဆရာဝန်များလူထုဆေးပညာသင်တန်း ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနား ကျင်းပပြုလုပ်ခြင်း
11 Nov 2020 University
ဆေးတက္ကသိုလ် ၊ မကွေး၏ Meeting for IPE & ICPC Workshop အခမ်းအနားကို ၂၀၂၀-ပြည့်နှစ် ၊ နိုဝင်ဘာလ ( ၁၀ ) ရက် ၊ နေ့လည်(၂ : ၀၀ ) နာရီတွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။
05 Aug 2020 University
အလုပ်သင်တာဝန် (၁)နှစ်ချထားသူများ (၆/၂၀၁၈) သင်တန်း (ပုံမှန်) (၅)ကြိမ်မြောက်တို့၏ အလုပ်သင်ဆရာဝန်များ လူထုဆေးပညာ သင်တန်း ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကျင်းပပြုလုပ်ခြင်း
0 Current Total
0 Current Teaching
0 Current Office
Official Web Site Events
29 Dec 2020 Mathematics
ဆေးတက္ကသိုလ်၊ မကွေး ဆေးပညာမဟာသိပ္ပံ (ခွဲစိတ်ကုပညာ) ပထမနှစ် (၁/၂၀၂၀) သင်တန်းသား (၄) ဦး၏ ကျမ်းငယ် Protocol ဖတ်ကြားတင်သွင်းခြင်း အခမ်းအနားကျင်းပပြုလုပ်ခြင်း
21 Dec 2020 Mathematics
ဆေးတက္ကသိုလ်၊မကွေး “Implementation Workshop for IPE Competency Domain 1( Ethics and Shared Values) Workshop အခမ်းအနား ကျင်းပပြုလုပ်ခြင်း
21 Dec 2020 University
ဆေးတက္ကသိုလ်၊မကွေး“Training of Trainer Workshop on IPE Core Competencies Domain 1( Ethics and Shared Values) Domain2( Roles and Responsibilities) in Faculty Members” Day3Workshop ပိတ်ပွဲအခမ်းအနားကို ၂၀၂၀ပြည့်နှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၁၇)ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခြင်း
ဆေးတက္ကသိုလ်၊မကွေး“Training of Trainer Workshop on IPE Core Competencies Domain 1( Ethics and Shared Values) Domain2( Roles and Responsibilities) in Faculty Members” Day2Workshop အခမ်းအနားကျင်းပခြင်း
15 Dec 2020 University
ဆေးတက္ကသိုလ်၊မကွေးတွင် Training of Trainer Workshop on IPE Core Competencies Domain 1( Ethics and Shared Values) Domain2( Roles and Responsibilities) in Faculty Members ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကျင်းပခြင်း
ဆေးတက္ကသိုလ်၊ မ​ကွေး Ethics review committee zoom meeting ကျင်းပပြုလုပ်ခြင်း
Click for more announcement
02 Aug 2021 Registrar
ဘွဲ့လွန်သင်တန်းများအတွက် ဝင်ခွင့်အရည်အချင်းစစ် ရေးဖြေစာမေးပွဲသို့ ဖြေဆိုခွင့်ရရှိသူများ၏ ခုံအမှတ်စာရင်း ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း
11 Jun 2021 HeadofSectionIT
ဆေးတက္ကသိုလ်၊ မကွေး ဘွဲ့လွန်သင်တန်းသား/သူများ သင်တန်းပြန်လည်တက်ရောက်နိုင်ရေးကိစ္စ
06 Apr 2021 HeadofSectionIT
ဆေးတက္ကသိုလ်၊မကွေး နောက်ဆုံးနှစ် အမ်ဘီဘီအက်စ် အပိုင်း(ခ) (၆/၂၀၁၈) (နောက်ဆက်တွဲ)သင်တန်း ကြေညာချက်
06 Jan 2021 Registrar
14 Dec 2020 Registrar
ဆေးဘက်ဆိုင်ရာသင်တန်းသုံး (Skill Lab) ပစ္စည်းများအတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း
05 Nov 2020 Registrar
10321 ဆေးတက္ကသိုလ်၊ မကွေး ၂၀၂၁ပြည့်နှစ်၊ မေလတွင် တက်ရောက်သင်ကြားလျက်ရှိသော ဘွဲ့ကြို/ဘွဲ့လွန် ကျောင်းသား/သူများစာရင်း
02 Jun 2021 University
Mock Exam Type Maths (12/2019)
17 Mar 2020 University
28 Feb 2020 University
Address: 7th Mile, Natmauk Road, Magway City, Myanmar
Phone: +95-632023760 Email: magwaymedicaluniversity@gmail.com
Powered by Crystal Image Co.,Ltd • All Right Reserved © University of Medicine Magway